Jenesis 40 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Josef kọwara nrọ ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ (1-19)
‘Ọ bụ Chineke na-akọwa nrọ’ (8)
Ememme ụbọchị a mụrụ Fero (20-23)
40 Mgbe ihe ndị a mechara, onyeisi ndị na-ebunye eze Ijipt mmanya+ na onyeisi ndị na-emere ya achịcha mejọrọ onyenwe ha, bụ́ eze Ijipt. 2 N’ihi ya, Fero wesara mmadụ abụọ ahụ na-ejere ya ozi iwe, ya bụ, onyeisi ndị na-ebunye ya mmanya na onyeisi ndị na-emere ya achịcha.+ 3 O wee tụba ha n’ụlọ nga dị n’ụlọ onyeisi ndị nche,+ bụ́ ebe a tụrụ Josef mkpọrọ.+ 4 Onyeisi ndị nche nyefeziri ha n’aka Josef ka o lekọtawa ha.+ Ha wee nọrọ n’ụlọ nga ruo oge* ụfọdụ. 5 Onye na-ebunye eze Ijipt mmanya na onye na-emere ya achịcha, bụ́ ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ, rọrọ nrọ n’otu abalị. Nrọ onye nke ọ bụla n’ime ha nwere ihe ọ pụtara. 6 Mgbe chi bọrọ, Josef batara hụ ha, ma ihu ha gbarụrụ agbarụ. 7 N’ihi ya, Josef jụrụ ndị ahụ na-ejere Fero ozi, bụ́ ndị ya na ha nọ n’ụlọ nga dị n’ụlọ nna ya ukwu, sị: “Gịnị mere ihu unu ji gbarụọ taa?” 8 Ha wee sị ya: “Anyị abụọ n’otu n’otu rọrọ nrọ, ma e nweghị onye na-akọwa nrọ anyị na ya nọ.” Josef sịziri ha: “Ọ̀ bụ na ọ bụghị Chineke na-akọwa nrọ?+ Biko, kọọrọnụ m ya.” 9 Onyeisi ndị na-ebunye eze mmanya wee kọọrọ Josef nrọ ya, sị: “Ná nrọ m, e nwere osisi vaịn dị n’ihu m. 10 Osisi vaịn ahụ nwekwara alaka atọ. Mgbe ọ na-epu akwụkwọ ọhụrụ, ọ mara ifuru, mkpụrụ ọ mịrị n’ụyọkọ n’ụyọkọ chakwara. 11 Eji m iko Fero n’aka, m wee were mkpụrụ vaịn ndị ahụ pịnye mmiri ha n’iko Fero. Mgbe m pịnyechara ha, m bunyere Fero iko ahụ.” 12 Josef sịziri ya: “Lee ihe nrọ gị pụtara: Alaka atọ ahụ bụ ụbọchị atọ. 13 N’ụbọchị atọ taa, Fero ga-akpọpụta gị, nyeghachi gị ọrụ gị.+ Ị ga-ebunyekwa Fero iko ya otú ị na-emebu mgbe ị bụ onye na-ebunye ya mmanya.+ 14 Ma, chetakwa m mgbe ihe gaziiri gị. Biko, meere m ebere* ma kọọrọ Fero banyere m, ka e wee kpọpụta m n’ebe a. 15 N’eziokwu, e si n’ala ndị Hibru tọrọ m,+ emeghịkwa m ihe ọ bụla n’ebe a mere ha ga-eji tụba m n’ụlọ mkpọrọ.”*+ 16 Mgbe onyeisi ndị na-emere eze achịcha hụrụ na ihe Josef kọwara dị mma, ọ gwara Josef, sị: “Ná nrọ nke m, ebu m nkata atọ n’isi, achịcha na-acha ọcha dịkwa n’ime nkata ndị ahụ. 17 Ụdị achịcha dị iche iche e meere Fero dịkwa n’ime nkata nke dị n’elu elu. E nwekwara nnụnụ ndị nọ na-eri achịcha ndị ahụ dị na nkata ahụ m bu n’isi.” 18 Josef gwaziri ya, sị: “Lee ihe nrọ gị pụtara: Nkata atọ ahụ bụ ụbọchị atọ. 19 N’ụbọchị atọ taa, Fero ga-egbupụ gị isi ma kwụwa gị n’osisi, nnụnụ ga-erikwa anụ gị.”+ 20 Ụbọchị nke atọ ahụ bụ ụbọchị Fero na-echeta ụbọchị a mụrụ ya.+ O wee meere ndị niile na-ejere ya ozi oriri. Ọ kpọpụtara onyeisi ndị na-ebunye ya mmanya na onyeisi ndị na-emere ya achịcha n’ihu ndị na-ejere ya ozi. 21 Fero nyeghachiri onyeisi ndị na-ebunye ya mmanya ọrụ ọ na-arụbu, ya ebunyewekwa ya mmanya. 22 Ma ọ kwụwara onyeisi ndị na-emere ya achịcha n’osisi, otú Josef kwuru mgbe ọ na-akọwara ha nrọ.+ 23 Ma, onyeisi ndị na-ebunye eze mmanya echetaghị Josef. O chefuru ya.+
^ Na Hibru, “ụbọchị.”
^ Ma ọ bụ “gosi m ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Na Hibru, “n’olulu.”